Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Septambra 2019 à 19:00
Endrik'io pejy io tamin'ny 17 Septambra 2019 à 02:33 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Septambra 2019 à 19:00 (hanova) (esory)
Ny [[Alahamady]] no volana sy vintana voalohany amin'ny fanandroana. [[Renivintana]] ny Alahamady. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe االحمل / ''Al-Hamal'' ("ondrilahy") ny teny hoe ''Alahamady''. Ny zoro avaratra-atsinana amin'ny trano no toerana omena azy. Io zoro io dia atao hoe zorofirarazana koa. Ny faritra na tanàna ao avaratra-atsinanan'ny tanàna iray dia atao hoe "Alahamadin-tany" ho an'io tanàna faharoa io.
LazanaLazaina fa mibaby ny Alohotsy sy mitrotro ny Adaoro ny Alahamady sady mifandratra amin'ny Adimizana nefa ny mitanila eo amin'ny Asombola sy Alakarabo izay iandrianany sy iarenany ny vintana Alahamady. Amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Alahamady, dia vava Alahamady (na vavan'Alahamady) sy ny vonto Alahamady (na vonton'Alahamady) ary ny vody Alahamady (na vodin'Alahamady).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/974868"